Xirmo Bilaash ah oo Burushka Barafka | Abuurista khadka tooska ah
Xirmada soo socota ee aan kuu keenayo waxay ku imaan doontaa anfacaya abuurista mashaariicda halka qoraalka looga baahan yahay. Muuqaallo, qoraallo, jilayaal ... Muuqaalka baraf Waa wax iska gaar ah suurtagalna maahan in lagu helo iyada oo loo marayo xulashada burushyada horay loo sii dejiyey ee Adobe Photoshop na keenayo. Waan saxayaa, haa waa suurtagal (Waxaan ka hadlaynaa Photoshop), laakiin sidoo kale waxay noqon doontaa waalli dhab ah oo aan loo baahnayn (in kastoo hubaal dhammaan kuwa wax liidaya miirayaasha, adeegsiga nuucaanadda nuucaan ah sidoo kale waxay noqon doontaa xurmo, ma aqaan). burush baraf burush burush burush baraf
Muhiimadu waxay tahay inay si weyn noo anfacayaan waana taas sababta aan kuugu keenay. Adoo tixgelinaya inaad hadda abuuri doontid dhowr mashruuc oo la xiriira mowduucyada Kirismaska ​​iyo jiilaalka, way ku soo hagaagi karaan. Waxyaabaha ku jira ayaan dhigay server-ka 4 la wadaagay, ee bilaashka ah (sida had iyo jeer aan sameyno). Haddii ay jiraan wax dhibaato ah marka la soo degsanayo, waa inaad ii sheegtaa.
Waxaan sidoo kale fursaddan uga faa'iideysanayaa inaan idin xusuusiyo inaan furnay qeybta codbixinta ee qeybtayada Tartanka kaarka kirismaska oo hadda waad u codeyn kartaa soo jeedinta ka timid qodobkan, ka dib waxaan kaaga tagayaa oo ay ku jiraan nidaamka codbixinta, oo shaqeyn doona illaa Diseembar 23.
Oo maya! Ma iloobin xiriiriye soo dejinta boodhka, taas oo ah waxa aan halkan kuugu soo ururiyey:
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Baakad bilaash ah oo dhaxan iyo burush baraf ah
Kaadhadhka boosta ee ku jira labada boos ee hore waa kaftan, sax? Sababta oo ah tan 1aad waxay leedahay kaar, laakiin tan 2aad… Ilmahayga 4-ta bilood jira wax badan ayuu ka sii fiicnaan karaa.
Waad salaaman tahay Ciise, xusuusnow inay tahay codbixin xor ah waana waxa dadku go’aansado… Sidaad fahmi doontid, wax xukun ah kuma qaadi karo soo jeedinta… Waad ku mahadsan tahay inaad noo dhaaftay aragtidaada iyo salaantaada!
Bilaash? Ha yeelin Bedelka akoonka facebook, Twitter, Google ...
Taasi maahan bilaash, taasi waa qiimo aad u sarreeya. Macluumaadka aad weydiisato inaad soo dejiso waa midka iibiya kuwa ugu qaalisan.
Waan ku faraxsanahay dadaalka, laakiin maya mahadsanid.
(Oo fadlan ka saar "bilaashka ah, had iyo jeer")
Abuur akoon cusub oo geli emayl been abuur ah. Waa wax fudud oo bilaash ah
Waa hagaag waxay u muuqataa in haddii aad ilowday xirmada barafka, waligey ma arkin.